Health Textile, Hidden uziphu, Khangela Ilaphu - Health
Support Call 0086-13586821262
Iimveliso zokuthintela ubhubhane
Ukufika Series entsha
Table ingubo Series
Sinikezela COMPETITVE: amakhethini, kwentloko, amalaphu aqhelekileyo ...
inkampani yethu lasekwa ngo-2006, ise-Chinese Port City --Ningbo. Ukususela kokusekwa kwayo kuye uzinikele kuphuhliso kunye kwiintengiso namalaphu ekhaya. Thina umgca wemveliso neyethu yaye abasebenzi sika Fowuna pack ...
Iipaneli zamakhethini ezimnyama
Imakethi yephaneli yamakhethini igcwele kakhulu, nangona kunjalo amakhethini amnyama ahlala ekulungele ukuhonjiswa kwekhaya. Uyilo olulula, ubunzima obunzima, ukuziva ngesandla okuhle, ukuxhoma okuhle, ukugqiba kombane, Iyahambelana uninzi lweemfuno zabathengi. Jonga umfanekiso, yidayimani jacquard de ...
Isihloko: Ishicilelwe ephothiweyo ilaphu umqamelo
Uyilo olushicilelweyo lusathandwa kakhulu kumhombiso wasekhaya. Sinezinto zoyilo ezintle, uyilo lwezilwanyana, uyilo lwezityalo, uyilo lwaselwandle, kunye nokuninzi koyilo oluceliweyo kuyilo lwabathengi. Ubungakanani obuqhelekileyo bungu-18 "x18" okanye u-20'x20 "nge-PP ethambileyo. Amalaphu ethu esiseko enziwe nge microfiber, ...
Isihloko: Iphaneli yekhethini emnyama
Ikhethini elimnyama elinamalaphu ayi-210gsm Holland velvet, i-embossing embossing yombane, uyilo lweklasikhi, ukubukeka okunethezeka, ukuhambisa okuthambileyo kunye nokuxhoma okuthe ngqo. Ubungakanani be-37 "x84" 2 pk kunye ne-52 "x84" engatshatanga, iigrommets, imibala emininzi, ilungile kwigumbi lokuhlala nakwigumbi lokulala. Ngaphezulu iipaneli zamakhethini anomdla ...
Isihlalo umqamelo ngeenxa zonke
Izinto eziphathekayo ziyanda
Lwedilesi: # 27, Hengfeng Rd, Easten Nesimo Area, Fenghua, Ningbo
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. - Hot Products - eKhaya - AMP Mobile
Printing ukuzondelela , Car Seat ababetheki kakhulu , Chaise Lounge ababetheki Seta , Print ababetheki kakhulu , Suede , iPhaneli ,